गजमेर र थापालाई नारायणगोपाल स्मृति सम्मान
काठमाडौँ । यस वर्षको सङ्गीतकार रञ्जित गजमेर र जगतमर्दन थापालाई प्रदान गरिएको छ । स्वरसम्राट् नारायणगोपालको २९औँ स्मृति दिवसका अवसरमा नारायणगोपाल सङ्गीत कोषले बिहीबार उनीहरुलाई रु २५ हजार र सम्मानपत्र प्रदान गरेको हो । स्मृति दिवसकै अवसर पारेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको नारायणगोपाल पेमला सुरमय गीतगङ्गाको शिलान्याससमेत गरिएको छ । विस्तृतमा
अभिनेत्री दिशाको भाइरल तस्वीर
तस्वीरमा शनाया कपुर
चकलेटी अभिनेत्री अदिती १० तस्बिरमा
माया र सेक्सबारे तापसीको यस्तो प्रतिक्रिया
यी हुन् एशियाको सबैभन्दा ‘सेक्सी’ पुरुष
छोरा क्रिकेटर, बुबा प्रशिक्षक !
चर्चित रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल २’ को फाइनल शनिबार
बलिउडका चर्चित कलाकारहरुका छोरीहरु के गर्छन् ?
बलिउड परिवारमा केही यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् जसले वुबा आमाको बाटो आफुलाई लैजान मानेनन् । उनीहरु फिल्म लाइनभन्दा पनि अरु नै व्यवसाय गर्न रुचाए ।
बलिउडका चर्चीत ‘चेनस्मोकर्स’
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता शाहरुख फिटनेशलाई लिएर कडा मेहनत गर्छन् । तर, उनको नराम्रो बानी भने उनले कहिल्यै छोड्न सकेनन् ।
सिड्नी । नेपालीहरुको महान चाड दसैँ रमाइलोसँग मनाउन सिड्नीमा दशै रमझम सँझ २०१८ हुने भएको छ । असनेप इभेन्टको आयोजनामा यही ५ अक्टोवर साँझ सार्क होटल लिभरपुल स्ट्रिट सिड्नीमा यो कार्यक्रम हुन लागेको हो ।
१२ वर्षमै २ वर्ष जेठीसँग सेक्स गरेको थिएः रणवीर सिंह
एजेन्सी । बलिउडका चर्चीत नायक रणवीर सिंहले आफ्नो सेक्स लाइफबारे अचम्म लाग्दा रहस्यहरु खोलेका छन् ।
हलिउडमा जमेकी नेपालकी छोरी अमृता
नर्वे । गत वर्ष जब नर्वेजियन एक्ट्रेस अमृता आचरिया ‘गेम अफ थ्रोन’ को दोस्रो सिजनमा मारिइन् तब यस सिरियलका फ्यानहरु निकै दुखी भए ।
कारागारभित्र मनोज गजुरेलको हाँस्यव्यङ्ग्य
भद्रपुर । गर्मीको मौसम, त्यसमाथि तातो घाम । क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दीका लागि कारागारको बसाई कष्टकर नहुने कुरै भएन तर आइतबार झापा कारागारका एक हजार २३ जना कैदीबन्दीले राष्ट्रिय कलाकार मनोज गजुरेलको प्रेरक प्रस्तुतिका कारण मनोरञ्जन मात्र होइन, शीतल पनि महसुस गरे ।
पारिवारिक टेलिसिरियल हाम्रो जिन्दगीको औपचारिक सुरुवात
परिवारिक टेलिसिरियल हाम्रो जिन्दगी नेपाली दर्शक माझ जनता टेलिभिजन मार्फत प्रसारणमा आएको छ । रिक्वष्ट मिडियाको प्रस्तुती रहेको यो सिरियलको औपचारिक सुरुवात भएको जानकारी राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी सिरियलका निर्देशक पुरुषोतम खतिवडाले जानकारी दिनु भएको हो ।
दक्षिण भारतीय फिल्मका अभिनेताहरुको पढाइ यस्तो
‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ ट्रेलरः अमिर–अमिताभको लडाईं
काठमाडौँ । बुहप्रतीक्षित फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यशराज ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको ट्रेलर यशराज चोपडाको जन्मदिनको अवसरमा आज सेप्टेम्बर २७ मा सार्वजनिक गरिएको हो ।
जब यी बलिउड कलाकारहरु कंगाल बने